Delta Air Lines dia manampy sidina bebe kokoa eo anelanelan'ny New York-JFK sy Karaiba
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Delta Air Lines dia manampy sidina bebe kokoa eo anelanelan'ny New York-JFK sy Karaiba
Aprily 23, 2018
Delta Air Lines dia manitatra ny fidirana eo anelanelan'ny New York-JFK sy Karaiba miaraka amin'ny sidina faharoa isan'andro mankany Nassau, The Bahamas, manomboka ny 1 Oktobra 2018; serivisy vaovao isan'andro any Kingston, Jamaika, manomboka ny 20 desambra 2018; ary serivisy ho an'ny asabotsy vaovao ihany any Port-au-Prince, Haiti, manomboka ny 22 desambra 2018.
"Tsy misy olona mampifandray an'i New York amin'izao tontolo izao noho ny Delta," hoy i Chuck Imhof, filoha lefitra - New York sy Sales, Atsinanana. “Manolotra sidina bebe kokoa amin'ny mpanjifantsika izahay any amin'ny toerana itodiana bebe kokoa noho ny orinasam-pitaterana an'habakabaka hafa ary faly izahay manampy sidina bebe kokoa mankany Karaiba amin'ny portfolio-n'ny tambajotranay matanjaka.”
Amin'ity ririnina ity, ny Delta dia hiasa hatramin'ny sidina 145 isan-kerinandro mankany amin'ny toerana 16 any Karaiba avy any JFK. Ireto misy fandaharam-potoana vaovao:
Miala ny isa amin'ny sidina
DL494 JFK amin'ny 1:45 hariva NAS amin'ny 5:10 hariva isan'andro
DL799 NAS amin'ny 6 hariva JFK amin'ny 9:10 hariva isan'andro
DL2841 JFK amin'ny 7:40 maraina KIN amin'ny 12:05 hariva isan'andro
DL2843 KIN amin'ny 8 maraina JFK atoandro isan'andro
DL2716 JFK amin'ny 8:35 maraina PAP amin'ny 12:50 hariva Sabotsy fotsiny
DL2718 PAP amin'ny 1:55 hariva JFK amin'ny 5:55 hariva Sabotsy fotsiny
Ny sidina mankany Kingston dia hiasa amin'ny fiaramanidina Boeing 737-800, misy seza 16 Kilasy Voalohany, seza 36 Delta Fahafahana +, ary seza 108 Main Cabin. Ny sidina mankany Nassau sy Port-au-Prince dia hiasa amin'ny fiaramanidina Airbus A320 misy seza 16 Kilasy Voalohany, seza 18 Delta Comfort + ®, ary seza 126 Main Cabin.
Ny tetikasa fizahan-tany maharitra dia manomboka any Puerto Rico miaraka amin'ireo manampahaizana ao amin'ny Harvard
Roiback, miorina ao Palma, dia manamafy ny toerana misy azy any Moyen Orient